‘कान्छी’ रिलिजको मुखमा श्वेताको मन किन रमायो ? « Ramailo छ
‘कान्छी’ रिलिजको मुखमा श्वेताको मन किन रमायो ?
दर्शकमाझ आउन बाह्र घण्टा बाँकी हुँदा ‘कान्छी’ को नयाँ गीत रिलिज गरिएको छ । अर्जुन पोखरेलको सुमधुर संगीत रहेको ‘यो मन रमाउँदै’ बोलको गीतमा अञ्जु पन्त र युवराज चौंलागाईंको स्वर छ । शब्द दिवाकर भट्टराईले लेखेका हुन् । गीतको शब्द तथा संगीत मनछुने छ । अभिनेता दयाहाङ राई र अभिनेत्री श्वेता खड्का फिचिरिङ भिडियो यस्तो बनेको छ :
‘कान्छी’ हरेक उमेर समुहका पारिवारका सदस्य बसेर हेर्न मिल्न फिल्म रहेको निर्देशक आकाश अधिकारीले बताएका छन् । यम थापाको लेखन रहेको फिल्ममा दया र श्वेताको मुख्य भूमिका छ । साथमा नीर शाह, अनु शाह, अशान्त शर्मा, कामेश्वर चौरसिया, प्रज्वल सुजल गिरी, भूमिका श्रेष्ठ लगायत कलाकारहरुको अभिनय छ । ‘कान्छी’ मा पुरुषोत्तम प्रधानको छायाँकन, अर्जुन अनि राजनराज सिवाकोटीको संगीत छ ।